Landelisa - phambili indaba
Kuqondiswe ngu Ues Kreyven, 'uyise-umsunguli "edumile Freddi Kryugera, wavuma usini phezu horror movie. Wabhala uhlaka ngokudweba "The Scream" akugcini nje fixated ku cine Thrash zingadedeli, kodwa inkhulumomphendvulwano izinhlamvu edingida ukuthi iluphi usizo horror kumdlalo yimpumelelo ngempela.
Lapho phambili brilliant
Uyini kokuvikela movie? Uma nje - phambili ezinye amabhayisikobho. The guys kusukela "Scream", mhlawumbe abazi ukuthi bayoba amaqhawe kumdlalo. Kodwa babeqinisile, ukushaya kumdlalo yimpumelelo kakhulu "Njengabafokazi Nezakhamuzi," "Terminator 2:. USuku Lokwahlulela" Lesi yisona sequels engcono ibhekwa kinoekspertov eziningi izilaleli. Futhi kuzo zombili izindawo, umqondisi izandiso eyenziwe Dzheyms Kemeron. Uma "Njengabafokazi Nezakhamuzi" waba unwound intambo le Thriller lwendaba, wathwebula Ridli Skottom, e umqondisi "Terminator 2" baqhubeka nomsebenzi kuqalile nguye engxenyeni yokuqala. Cameron uye wakwazi hhayi kuphela ukuthuthukisa izindaba prequel, kodwa usongo nakakhulu futhi okwesabisa umphakathi, kodwa futhi igcinwe umlingisi oyinhloko eyandulela ifilimu. Esikhathini "Terminator" yesibili Arnold Schwarzenegger bese-ngomfazi umqondisi Linda Hamilton. Le filimu horror mayelana monstrov- "izihambi" futhi nqwamana them Elen Ripli e indima Heroine abanesibindi futhi inkanyezi le inimitable Sigurni Uiver. Ngakho, kumdlalo - ngokuvamile iphrojekthi ngempela yimpumelelo, ukudalwa okuyinto nje isuke ibangelwa impumelelo kwezentengiselwano sibe ibhayisikobho eshisa izikhotha.
Ngakho bazalwa franchise
Ngokuvamile ngesisekelo kwezincwadi ifilimu inezingxenye eziningana, futhi yonke indaba alingeni kohlaka ekuhleleka kwesinema olulodwa. Khona-ke kumdlalo - kuba, isibonelo, lithathelwe ifilimu umthamo yesibili, noma incwadi elandelayo by the author efanayo nabalingiswa efanayo. Ngezinye izikhathi lokhu kuphumela "serialized" Saga. Njengoba kwenzeka, isibonelo, ne umjikelezo Harry Potter noma Narnia ezamehlela esikhathini ongaqondakali, ne "Twilight", ne "Godfather". Francis Ford Coppola, ukudubula kwakhe baqhubeka ngokuthi "The Godfather", wakwazi ukuvimba prequel ukufeza ngaphesheya ibhodi. Uma ingxenye yokuqala kwaba umnikazi we ezintathu "Oscars", owesibili Uthole 6 aphume 11, okuyinto uqokelwe. Esikhathini "Godfather 2" kuyinto umugqa athuthukile ngaphezulu kwezinsuku ezingeziningi indodana encane uVito Korleone - (! URobert De Niro lifanelwe Academy Award 100%) Michael (Al Pacino), plus zokuhlola show up ne indaba yokuphila uVito abasha. Nakhu movie "Twilight. Saga. New Moon, "ke akusebenzanga kahle kakhulu. Nakuba injabulo izilaleli enikeziwe (abalandeli e Saga ngokwanele), kodwa ngenxa yokuthi kukodwa encwadini yesibili kancane eside nevilaphayo, kukhona isinyathelo esincane (okuyinto "raskochegarilsya" kuya sequels elandelayo), ifilimu wadedelwa kakhulu cha.
Ayikho catch, akukho kuyomfica!
Uma sicabangela imizamo buthaka lwezandiso, it is hhayi kakhulu uthole enye inkondlo elama - liphinde into ngempela njalo. Ngakho abenzi mafilimu ukukholelwa ukuthi Crest i impumelelo ekhona ungenza kangcono, ngakho ukukusho "uhambisane zikufice" ukuthi iqala izinto ngokungagwegwesi ebuthaka. ibhayisikobho uDavide Cronenberg sika "The Fly" nge ebukekayo (ngisho ngesimo soguquko lwegciwane singalawuleka) Infernal Brunette giant Jeff Goldblum futhi Dzhinoy Devis cute waba zakudala uhlobo. Naphezu kweqiniso lokuthi yathatha cishe engu-30 edlule, i-Thriller ezithakazelisayo futhi original. Yini eyenza umqondisi ingxenye 2 Kris Uolas, akusho ukuya ngokuqinile nanoma ikuphi ukuqhathaniswa original. Ngokufanayo, Jan de Bont akakwazi "ekhuphukela phezulu" "Isivinini" sakhe ekusekeleni tape. Kusuke kufanele kube njalo Kianu Rivz, wayengafuni ukuba azibandakanye "Isivinini 2"! Landelisa - lesi sithombe ezinyakazayo "Hannibal", isitshela indaba efanayo ubuhlakani cannibal Lecter, owaba umlingisi losemcoka "Ukuthula we Amawundlu." Siletha futhi Mnumzane Anthony Hopkins, noma ukuthi esihlalweni umqondisi kwakuyilungelo zihlaba Ridli Skott. Phela, lo Dzhodi Foster, uklonyeliswe "Oscar" ngoba "Ukuthula we Amawundlu," samuntu futhi ngalenqaba Clarissa isithombe okwesibili. Akunakwenzeka ukubiza le Thriller elibangelwa ukwehluleka, it is impela baziswa. Kodwa uma kuqhathaniswa prequel, ulahlekelwa.
Yileyo indlela enye inkondlo elama ungaba yisikhulumi esihle wobuciko ezimele noma ukujivaza abanye abantu babhekwe njengabezinye eyandulela.
Justice League The Avengers Movie Impendulo
Romance Russian "Inkinga yokungabi Eseyibhobhodlana." Abalingisi amathenda yobudala namaqhawekazi
Biography Stellar: Salman Khan
Indlela ukuhlela intandokazi iholidi? Udinga nje oda ukulethwa isixha
Maxx Royal Kemer kuyona 5 *: incazelo, izithombe. Ihhotela "Max Royal" (Kemer, Turkey): abahambi Izibuyekezo
Mangaki amakati alala ngansuku zonke? Yithinta ukuthini isikhathi sokulala kwabo?
Smith Machine Simulator - kuyinto ejimini encane